Mashandisiro ekushandisa Broadcom wifi muFedora uye vhuraSUSE | Kubva kuLinux
Mashandisiro ekushandisa Broadcom wifi pane Fedora uye vhuraSUSE
Zironid | | GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Pave nemazuva akati wandei kubvira pandakaisa vhura uye mubvunzo waive:
Ndinoita sei yangu Wifi?
Mune ese ma distros andakaona wifi ichindipa matambudziko (kunze kweUbuntu neMint), saka ndakafunga kuti ndaizotumira mhinduro dzandakawana Fedora y vhuraSUSE.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuisa unotevera kuraira mune iyo terminal:
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware (izvi zvinoisa firmware)
(Ongorora: Handizive kana ichishanda pane mamwe ma distros)
Kune Fedora zvakati wandei zvakanyanya kuoma:
Uye wifi inofanira kushanda.
Ndinovimba izvi zvinobatsira, maererano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Mashandisiro ekushandisa Broadcom wifi pane Fedora uye vhuraSUSE
Inonakidza nezve openuse script ye b43. Handizive kana iwe uine iyo Hardware asi varidzi venhare vari kunyatso kuita zvirinani, kutaura zvazviri, ini handizive kana iwe wakacherekedza asi ndizvo zvandinofunga iwe zvaunofunga nezve fedora.
Iyo nhare-wl ye openuse iri mu packman, kubva kuvhurause 11.2 kusvika kugumburwa uye kunyangwe kune akasiyana openuse kernels.
Saizvozvowo, kune mamwe akawanda echitatu-bato repositori anewo, asi ini ndinokurudzira avo vanobva packman. Iyo repo inogona kuwedzerwa kubva kuYaST kana kungoita ne 1 bhatani rekuisa iro riri muchikamu chepamusoro kurudyi chewebhu yakabatana.
Heano mamwe gwara rekuwedzera isina waya.
Zvakare, kana iwe uchifanira kushandisa mamwe madhiraivhi asina waya senge USB adapta pane desktop PC, iyo kernel-firmware package ine zvese zvese zvaungade.
Chokwadi ndechekuti muridzi wepamba ndiye chete wandakagonesa kuti ishande, ndakatoyedza paDebian, Fedora, Arch pakati pevamwe uye ndiyo chete yandakagona kuita basa.
Chokwadi, sekutaura kwaKrel, nePackman repository yakagadzirirwa, ingoisa iyo "broadcom-wl" package. Wobva watangazve muchina, uye zvese zvinofamba mushe. Ini ndinoshandisa Broadcom isina waya uye ndanga ndichiishandisa muOpenSUSE kwemakore maviri pasina matambudziko.
Nzira yakafumurwa yeFedora yakafanana nezvandaifanira kuita muMandriva 2011, ndichibvisa mirairo miviri yekupedzisira.
Mu fedora, kana iine rpm-fusion repository yakagadzirirwa (Sa 99% yevanhu vanofa), ivo vanongofanirwa kuisa iyo kmod-wl package. 😉
Manheru akanaka, ndine dambudziko nenzira iyi, zvese zvakaiswa mushe, asi pandinozvitangazve, handisisina, ndinogona kungoshandisa wiring uye ini ndiri newbie kuLinux.
Victor Flores anochengeta mufananidzo akadaro
pamhinduro dzese dzandaive ndawana, iyi ndiyo yega yakandibatsira ... ndatenda
Pindura Victor Flores
maita basa kwazvo .. chakanakisa mupiro
Gadzirisa dambudziko neWifi (Broadcom 43xx) pane ubuntu mushure mekugadzirisa
Entropy: equo. Kugadziridza iyo kernel.